ငါပျော်ရွှင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှု access ကိုရနိုင်? ပြည်သူ့လူများနှစ်ခုအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်. ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားရှိသူများလည်းပါဝင်သည်, အဘယ်သူသည်အစဉ်မပြတ်ပျော်ရွှင်မိမိနှင့်အတူကျေနပ်ဖြစ်ပါသည်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ၌အောင်မြင်, နှင့်အလုပ်မှာ. ဒါပေမယ့်ဒုတိယအမျိုးအစားရှိသူတို့ဖြစ်ကြသည်, ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားလျှောက်ထားလိုသူများအတွက်. ဖွောငျ့ဆို, ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီကြိမ်ဖြစ်ရပြီ, ကျနော်တို့ကကောင်းမွန်စွာထိုက်တန်တဲ့ဂုဏ်ထူးကိုခံစားနိုင်တဲ့အခါ, ဒါပေမယ့်ရှိမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ကြိုးနှံ၏, ကျနော်တို့၏ကွောကျရှံ့သောအဘို့ဤအတွက်အရသာရှိမရှိ.
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏အချိန်လေးအတွက်လူတိုင်းအမြဲစိတ်ဝိညာဉ်၏အိပ်မက်, ၏, ရေထု၏အလင်းချောင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် run ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, သာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နှင့်အတူအဝတ်လျှော်, ထိုနေ့၏ပေမယ်ရှိသမျှကိုအနုတ်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အာရုံ. ထိုသို့, အမှန်, အများဆုံးရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်ထိုကဲ့သို့သော "ရောဂါကိုငြိမ်းစေသော" ဖြစ်ပါတယ်, လျှင်အာဏာကိုအတွက်ဒီတိုးအကြိမ်ပေါင်းများစွာ? ထိုအခါကထွက်လှည့် အကြီးတန်းစိတ်ဝိညာဉ်, စုံလင်သောစိတ်ဓါတ်များပေးဖို့တတ်နိုင်သော, လန်း, ဒါဟာကိုယ်ခန္ဓာတို့၏ရောဂါကိုငြိမ်းနှင့်, နောက်ဆုံး, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့.
နွေရာသီခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုစမ်းသပ်မှုအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်: ခရမ်းလွန်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်. ဓါတ်ရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးရန်, သငျသညျဂရုတစိုက်အကာအကွယ်နည်းလမ်းများ၏ရွေးချယ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်, အဖြစ်နေရောင်အတွက်သုံးစွဲအချိန်ကိုလျှော့ချ, အဘယ်သူမျှမကပို 1,5-2 နာရီတစ်ရက်.
နွေရာသီအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအတွက်, နားထောင်, ကမေးတယ်. အရေပြားကြမ်းကြီးထွားဖို့စတင်လျှင်, ထို့နောက်ပွတ်တိုက်လျှောက်ထား, အရေပြားခြောက်သွေ့လျှင်, nalehayte ရေ. နွေကာလ၌ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်မှု ပြည့်စုံခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ရပါမည်.
အရေပြားမျက်စိမှနှစ်သက်ဖြစ်သင့်, ထိုသို့ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်. ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကျန်းမာအရေပြားပေါ်မှာအမြဲမဟုတ်မူတည်, သငျသညျအလှကုန်များအတွက်ပေးဆောင်ပိုက်ဆံအဘယ်သို့သောငွေပမာဏ, အလှပြင်ဆိုင်နှင့်အခြားအဆောက်အဦများနှင့်ပင်သင့်လျော်မပေးစောင့်ရှောက်မှု. ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိပြုလုပ်သင့်ရဲ့ပါဝါအပေါ်မူတည်, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, သငျသညျမောင်းနှင်နေကြသည်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သိရန်လိုအပ်သမျှရဲ့, သငျသညျအပြည့်အဝဟာသူတို့ရဲ့အရေပြားကျန်းမာရေးကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုလျှင်.
ကျွန်တော်တို့ကိုသဘာဝအသီးအသီးက၎င်း၏လှပမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုပေး၏. တစ်စုံတစ်ဦးကထူသောဇိမ်ခံဆံပင်တယ်, သူ – အဆိုပါမျက်တောင်ထိုကဲ့သို့သောအရှည်, အဘယ်သူမျှမမှင်လိုအပ်သို့မဟုတ်မွေးဖွားထံမှလက်သည်းခိုင်ခံ့ကျန်းမာမဟုတ်ကြောင်း. သို့သော်ရှိပါတယ်, သင့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါဘယ်သူကို, ဒီမှာ, သူတို့ပြော, မဟုတ်ဆံပင်, နှင့်မောက်အမြီး. သို့သော်ဤအမှုကိုပြုသောမဟုတ်ပါ. သင့်ရဲ့အလှတရားပြင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အတွင်းစိတ်အလိုတော်, ဒါဟာသင်အပေါ်မူတည်.
စာမျက်နှာ 1 မှ 2